प्रश्न: के त्यहाँ इनहेरिटेन्स साइकलमा पाँचौं पुस्तक हुनेछ - बाइकहाइक
प्रश्न: उत्तराधिकार चक्रमा पाँचौं पुस्तक हुनेछ?
के उत्तराधिकार चक्र समाप्त भयो?
के Eragon पुस्तक5मा मुख्य पात्र हुनेछ?
द फोर्क, द विच र द वर्म पुस्तक ५ हो?
के क्रिस्टोफर पाओलिनी नयाँ पुस्तकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
विरासतमा Eragon कति वर्षको हो?
के त्यहाँ चलचित्र एरागनको सिक्वेल छ?
के एरागोन र आर्य कहिल्यै सँगै हुनेछन्?
के Eragon कहिल्यै अलागेसियामा फर्कनेछ?
के क्रिस्टोफर पाओलिनी अलागेसियामा फर्कनेछन्?
श्रुइकन किन यति ठूलो ?
ब्रोमले इरागनलाई के भन्यो?
Eragon पुस्तकमा कस्तो देखिन्थ्यो?
किन असफल भयो Eragon चलचित्र ?
ब्रान्डन स्यान्डरसन धनी छ?
सबै समयको सबैभन्दा छिटो बिक्री हुने पुस्तक कुन हो?
Eragon मा Murtagh कति वर्षको छ?
के आर्य इरागनसँग प्रेममा पर्छन्?
विरासतमा रोरान कति वर्षको हो?
जेठो मा रातो ड्रैगन को हो?
जेठोको आवरणमा ड्र्यागन को हो?
के Eragon सबैभन्दा बलियो ड्र्यागन सवार हो?
के Eragon ले कहिल्यै आर्यलाई चुम्बन गर्छ?
Eragon को वास्तविक नाम के थियो?
के मुर्तगले नसुडालाई माया गर्छन्?
लगभग सात वर्षपछि, क्रिस्टोफर पाओलिनीले आफ्नो पाँचौं पुस्तक द इनहेरिटेन्स साइकल शीर्षकको द फोर्क, द विच र द वर्मबाट जारी गर्दैछन्। कथानक र पात्रहरूको विस्तार भएको काल्पनिक उपन्यास अमेरिकामा डिसेम्बर ३१, २०१८ देखि र बेलायतमा जनवरी १, २०१९ देखि उपलब्ध हुनेछ।
शृङ्खलाको चौथो र अन्तिम पुस्तक, इनहेरिटेन्स, नोभेम्बर ८, २०११ मा प्रकाशित भएको थियो। यस शृङ्खलाले विश्वभर ३३.५ मिलियन प्रतिहरू बिक्री गरेको छ।
Eragon/Saphira बुक V मा मुख्य पात्रहरू हुने छैनन्।
के द फोर्क, द विच र द वर्म लामो-चर्चा गरिएको पुस्तक पाँच हो जुन तपाईंले लेख्नुहुनेछ भन्नुभयो? न। द फोर्क, द विच र द वर्म अलागासियाको संसारमा स्थापित लघुकथाहरूको नयाँ शृङ्खलाको पहिलो खण्ड हो।
पाओलिनीको नयाँ विज्ञान कथा उपन्यास, टु स्लीप इन अ सी अफ स्टार्स, टोर बुक्स द्वारा सेप्टेम्बर १५, २०२० मा जारी गरिएको थियो। उसले आफ्नो विज्ञान-कथा पुस्तक समाप्त गरेपछि पाँचौं पुस्तकको साथ अलागासियाको संसारमा फर्कने योजना पनि छ।
विरासतको अन्त्यमा, एरागोन सत्र वर्षको छ। उनले पन्ध्र वर्षको हुँदा कार्भाहल छोडे र रजाकको खोजीमा सोह्र वर्ष पुगे।
इरागनको 2006 अनुकूलनको कुनै सिक्वेल छैन र फ्रान्चाइजी जारी राख्ने कुनै योजना छैन। सुरुमा, त्यहाँ दुई सिक्वेलहरूको योजना थियो, तर पहिलो चलचित्रको खराब रिसेप्शनको कारण, यी योजनाहरू अन्ततः सम्भावित फ्रान्चाइजीसँगै रद्द गरियो।
स्वाभाविक रूपमा, धेरै इरागन/आर्य "शिपरहरू" यो जोडी सँगै नहुँदा विनाश भएका थिए। “ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा यो हो कि शृङ्खला सकिए पनि इरागन र आर्यको कथा जारी रहनेछ। तिनीहरू धेरै लामो समयसम्म बाँच्न जाँदैछन्, र तिनीहरूको सम्बन्ध धेरै टाढा छ।" फेब्रुअरी 15, 2017।
Eragon Alagaesia फर्कन सक्दैन। तर यदि आर्यको लागि उसको चाहनाले उसलाई आफ्नो व्यक्तित्वलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्न पर्याप्त प्रभाव पार्छ भने, तब ऊ त्यो व्यक्ति हुन छोड्नेछ जसको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको थियो (र रजाकले श्राप दियो)।
Eragon र Saphira को साहसिक कार्य पछि यो एक लामो, अद्भुत यात्रा भएको छ, र धेरै मानिसहरूले सोचेका छन् कि क्रिस्टोफर कहिल्यै Alagaësia को संसारमा फर्कनेछन्। हो, उसले गर्नेछ! वास्तवमा, क्रिस्टोफरसँग अन्य धेरै अलागेसियन कथाहरूको लागि भविष्य योजनाहरू छन्!
मोर्जनको सहयोगमा, गाल्बेटोरिक्सले आफ्नो सच्चा सवारको हत्या गरेपछि श्रुइकनलाई चोर्यो। उनले शक्तिशाली डार्क जादूको साथ जवान ड्र्यागनको दिमागलाई घुमाए, ताकि श्रुइकनले गाल्बेटोरिक्सको नयाँ ड्र्यागनको रूपमा सेवा गर्नेछ। Galbatorix ले श्रुइकनको बृद्धिलाई कृत्रिम रूपमा गति दिन जादूको प्रयोग गर्‍यो, जसले उहाँलाई आकारमा विशाल बनायो।
बुशले Yazuac नरसंहार गरे, पुष्टि। "एरागन, मेरो छोरा। म तिम्रो बुबा हो।"।
एरागोनलाई खैरो कपाल र खैरो आँखा भएको वर्णन गरिएको छ। एरागनको गोरो कपाल र निलो आँखा थियो। कथाको सुरुमा एरागोन पन्ध्र वर्षको थियो। कथाको सुरुमा इरागन १७ वर्षका थिए।
चलचित्र असफल हुनुको एउटा कारण सरल छ: एरागोन चलचित्र मूल कथा भन्दा धेरै फरक थियो। फिल्मका धेरै पक्षहरू यसको असफलताको कारण थिए: पहिले नै भनिएझैं, यो फिल्म किन फ्लप भयो, यसको कथानक पुस्तकभन्दा एकदमै फरक भएकोले मुख्य पक्षहरू मध्ये एउटा थियो।
ब्रान्डन स्यान्डरसन नेट वर्थ: ब्रान्डन स्यान्डरसन एक अमेरिकी लेखक हुन् जसको कुल सम्पत्ति $6मिलियन छ। ब्रान्डन स्यान्डरसन डिसेम्बर 1975 मा लिंकन, नेब्रास्का मा जन्म भएको थियो। ब्रान्डन स्यान्डरसन नेट वर्थ। कुल मूल्य: $6 मिलियन लिङ्ग: पुरुष पेशा: लेखक, लेखक राष्ट्रियता: संयुक्त राज्य अमेरिका।
इतिहासमा सबैभन्दा छिटो बिक्री हुने पुस्तक ह्यारी पोटर एन्ड द डेथली ह्यालोज हो, जेके रोलिङको (युके) ह्यारी पोटर शृङ्खलाको सातौं - र अन्तिम - उपन्यास, जसले पहिलो २४ घण्टामा (वा प्रति घण्टा ३४५,८३३ पुस्तकहरू) 8.3 मिलियन प्रतिहरू बेचेको थियो। 24 जुलाई 345,833 मा 00.01 मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा यसको रिलीज।
मुर्ताघ अठार वर्षका उदास व्यक्ति थिए। उसको डरलाग्दो आँखा उसको लामो खैरो कपालको तालाले फ्रेम गरेको थियो। उहाँ क्लिन-शेभन, राम्ररी ट्यान्ड, मांसपेशी र आफ्नो सौतेनी भाइ, इरागन भन्दा अलि अग्लो हुनुहुन्थ्यो।
इनहेरिटेन्समा, आर्यले इरागनले बनाएको दोस्रो फेर्थप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाए र उनीसँग साँचो नाम साटासाट गरे। पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा, उनले केही छोटो क्षणको लागि सबै बहाना छोडे, प्रकट गर्दै कि उनीसँग उनको भावना छ।
रोरान सत्र वर्ष/आठ महिना र अठार वर्ष र पाँच महिनाको बीचमा हुन्छ।
काँटा एक रातो नर ड्रेगन थियो, मुर्तगसँग बाँधिएको थियो। उसलाई श्रुइकनद्वारा लड्न तालिम दिइएको थियो र द बर्निंग प्लेन्सको युद्धको समयमा उसले आगोको सास फेर्न सक्यो। काँटा हवाई लडाईमा निपुण थियो, सफिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम थियो, उनी गम्भीर घाइते भए पनि।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो संस्करणको एल्डेस्ट कभर, रातो ड्र्यागन थोर्न लेखक क्रिस्टोफर पाओलिनी डेवी डेसिमल [Fic] 22 LC क्लास PZ7.P19535 El 2005 preceded by Eragon।
ऊ सामान्यतया सवारहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो वा सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, तर सधैं बुद्धिमानी हुँदैन (जस्तै भ्राएल हेड ड्र्यागन राइडर थियो, तर गलबेटोरिक्सका अनुसार, ओरोमिस सबैभन्दा बुद्धिमान थियो)। पहिलो इरागन, अनुरिन, भ्राएल र इरागन शेडस्लेयर सबै हेड ड्र्यागन राइडर्स थिए र श्रृंखलामा सबैभन्दा प्रसिद्ध छन्।
होइन, एरागोन र आर्यले विरासतमा चुम्बन गर्दैनन्। राजा Galbatorix पराजित भएपछि, तिनीहरूले आफ्नो भविष्य सँगै छलफल गर्छन्, तर तिनीहरूले निर्णय गर्छ कि यो हो।
इरागनको वास्तविक नाम हिरो ग्यारी-स्टु प्रोटागोनिस्ट XXIII हो। @paolini bollocks।
उनको यातनाको बावजुद, मुर्तगको नासुआडाप्रति बढ्दो प्रेमले उनलाई राजाको यातना दिने उपकरणहरू विरुद्ध आफ्नो क्षमताले सकेसम्म रक्षा गर्न अनुमति दिनेछ। सुरुमा उनीसँग घृणा गरे पनि पछि उनी उनीप्रति न्यानो भइन् र उनी उनको एकमात्र साथी बनेकोले उनको भावनाको प्रतिफल दिन थालिन्।
द्रुत उत्तर: उत्तराधिकार चक्रमा चौथो पुस्तकलाई के भनिन्छ
विरासत चक्र को5बुक कहिले बाहिर आउछ
प्रश्न: उत्तराधिकार चक्र राम्रो छ
द्रुत उत्तर: उत्तराधिकार चक्र कसले लेख्यो
उत्तराधिकार चक्र कति लामो छ
विरासत चक्रमा कति पुस्तकहरू छन्
द्रुत उत्तर: विरासत चक्र श्रृंखलामा कतिवटा पुस्तकहरू छन्
द्रुत उत्तर: विरासत चक्रमा कतिवटा पुस्तकहरू छन्
द्रुत उत्तर: के म मेरो साइकलको पाँचौं दिनमा डिम्बाश निकाल्न सक्छु?
प्रश्न: ग्रीन बुक के थियो
के क्रिस्टोफर पाओलिनी इनहेरिटेन्स साइकलको लागि टिभी श्रृंखला चाहन्छन्
द्रुत उत्तर: रातो तम्बू पुस्तक कसले लेख्यो